सरकार र गोविन्द केसी सहमतिको अन्तिम विन्दुमा « Rara Pati
सरकार र गोविन्द केसी सहमतिको अन्तिम विन्दुमा
२३ असोज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारलगायतका मागहरू राखेर अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकार सहमति नजिक पुगेका छन् । डा. केसीले उठाएका मागहरू पुरा गर्ने प्रकृयामा दुबै पक्ष सहमत भइसकेको बताइएको छ ।
शिक्षा सचिव गोपी मैनााली र डा. जीवन क्षेत्री नेतृत्वको वार्ता टोली बिहिबार भएको छलफलबाट नै सहमति नजिक पुगिसकेका थिए । केहिबेरमा सरकार र डा. केसीका तर्फबाट बनेको वार्ता टोली छलफलमा बस्ने र सहमतिलाई औपचारिकता दिने जानकारी प्राप्त भएको छ ।
बिहीबार सहमति हुन नसकेको ६ बुँदे मागको चौथो बुँदालाई शुक्रबार दुबै पक्षबीचको आन्तरिक परामर्शपछि सहमतिको अन्तिम बिन्दूमा पुर्याएको हो ।
विश्वविद्यालय, आइओएम, काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धि मापदण्ड ऐनमै राख्ने र ऐन सशोधन नहँुदासम्म वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ती गर्ने सरकार र डा. केसीबीच सहमति भएको बताइएको छ ।